India: Eo Anelanelan’i Tibet Sy Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Febroary 2018 6:29 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, 繁體中文, 简体中文, 日本語, English
(Fanamarihana. lahatsoratra nivoaka tamin'ny Martsa 2008)
Nandritra ny andro vitsivitsy lasa izay, nifantoka tamin'ny fandaminana ny fitroaran'i Tibet sy ny Governemanta Shinoa ny vondrom-piarahamonina iraisam-pirenena, saingy ao India, nahitana adihevitra maromaro mikasika ireo hetsik'i Shina ao Tibet sy ny andraikitr'i Tibet ao anatin'ireo fifandraisana misy eo amin'i India sy Shina. Ahoana no tsy maintsy ho toeran'i India manoloana ny olan'i Tibet? Ao anatin'ny “Little Lhasa” na Dharamsala ao India ny governemanta Tibetàna an-tsesitany tantanan'i Dalai Lama . Nandositra an'i Tibet tao India ny Dalai Lama tamin'ny taona 1959 ary nanohy nonina tao hatramin'ny androany. Fanampin'izay, misy vahoaka Tibetàna marobe mitohy monina ao India hatramin'ny taona 1950.
Misarika ny saintsika handinika ny andraikitry ny Fivoriamben'ny tanora Tibetàna ny fanadihadiana stratejika ataon'i Raman momba ny fikomiana ankehitriny, ary manoratra hoe:
Tanteraka ny fanalàn'ireo vahoakan'i Tibet sy Sichuan ny tahotr'izy ireo ary itakian-dry zareo ireo zony eo amin'ny tanindrazany. “Tibet ho an'ireo vahoaka Tibetàna” no politikan'izy ireo… Mifanohitra amin'ny politikan'ny Masina mikasika ny fizakantena marina izany (Fihaonamben'ny Tanora Tibetàna) ary mitaky fahaleovantena tanteraka. Tsy manohitra ireo lalao Olaimpika ao Beijing izany.
Fanadihadiana iray maimaika an'ireo blaogy Indiana no maneho fa tena vitsivitsy tamin'izy ireo no nametra-panontaniana mikasika ny toeran'i India eo amin'i Tibet ary manontany tena raha toa i India tokony haka toerana matanjaka kokoa mikasika an'i Shina. Acorn; misarika ny saintsika ho amin'ny fikasan'ny mpitondra an'i Tibet, Tenzin Tsundue, hitarika diabe am-pilaminana miala ao India mankany Tibet ary manoratra hoe:
Ny antony tokana amin'io dia ny mba hanavotana ny governemanta shinoa amin'ny henatra tsy maintsy hiatrehana an'ilay toe-draharaha (ny tena azo antoka, dia ny tsy maintsy handroahana azy ireo).
Manamafy i Sudharshans eo amin'ny blaoginy fa mila maka toerana matanjaka kokoa i India. Manoratra izy fa:
Alefa India a!. Tsy maintsy hanohana an'ireo vahoaka Tibetàna izahay amin'ny tolona hikatsahan'izy ireo fahafahana. Ny zavatra tokana azon'i India atao dia ny nanao fanambarana hibodo tsy hanao Lalao Olaimpika… Tsy azoko mihitsy ny mbola tokony hanaovantsika ‘tango’ miaraka amin'i Shina. Manahy ve isika satria tsy afaka milalao an'ireo kilalao feno poizina mora vidy ireo zanatsika? Tsy ho gaga aho raha toa ny governemanta hamàny ampataloha fa hoe hisintona ny fanohanany an'ilay ivontoerana ny politburo noho ny fihetsehana hanoherana an'ireo nàmany ao Shina.
Brahma Chellaney, mpandalina ny resaka fiarovana, no namoaka lahatsoratra iray tena mahaliana mikasika an'i Tibet sy ny andraikiny ao anatin'ireo fifandraisana misy eo amin'i India sy Shina. Notsipihiny fa i India dia tsy afaka ny hanao tsinontsinona izay mitranga ao Tibet satria misy fiantraikany ara-stratejika maharitra ho an'i India izany. Manohana hevitra i Chellaney fa tonga ny fotoana ho an'ny governemanta indiana mba hanombanany ny politikany. Manipika izy fa:
Tsy azon'izy ireo sarangotina ny zavamisy tsotra hoe eo anelanelan'ny fitoniana sy ny fifandonana dia misy safidy samihafa anjatony mipetraka. Safidy iray diso – miankohoka amin'i Beijing na manomana fifandonana – no nampiasaina mba hisakanana ny adihevitra rehetra ara-drarirny momba ireo safidy politika.
Zavatra telo no tsipihin'i Chellaney fa tsy maintsy ataon'i India amin'i Tibet, ny iray amin'ireo dia, tsy maintsy atsahatr'i India ny fanndroany an'i Tibet ho ampahany iray amin'i Shina. Nomarihany tsara ny fanovàna iray goavana amin'ny lantompeo teo amin'ny fifandraisana nandritra ny fitsidihan'ny Praiminisitra Manmohan Singh tao Shina. Manoratra izy fa:
Ny volana Janoary lasa teo, i Manmohan Singh no praiminisitra voalohany niverina avy tany Beijing tsy nanao fanamarihana tsy voamarina momba an'i Tibet mba hamalifaliana ireo mpampiantrano azy. Tsy hita popoka tao anatin'ny fanambaràna niraisana ny teny ‘T’ – teboka iray fanalahidy izay tsy vitan'ireo media ny nandray azy.